Rega Iwe Unakirwe Iyo Yakazara Turnkey One-stop Professional Agriculture Greenhouse Service.
Chiedza Kunyimwa Greenhouse
Shengqiang Greenhouse Rega iwe unakirwe neiyo yakazara Turnkey one-stop professional service
Nyanzvi yekurima greenhouse mutengesi ane 18+ makore ruzivo.
Greenhouse Kurima inzira yekurima zvirimwa nemiriwo munzvimbo ine greenhouse ecosystem. Shengqiang greenhouse greenhouse vagadziri vegreenhouse vanokupa yakanakisa epurasitiki firimu greenhouse, girazi greenhouse, polycarbonate sheet greenhouse, uye greenhouse accessories.
Zvekurima akawanda-span girazi greenhouse yekudyara / kuratidzwa / kuona
Girazi greenhouse inokura tende inotora inopisa-galvanized simbi furemu, iyo yekuvharisa inowanzoshandiswa 4-5mm yemhando yepamusoro girazi rinoyangarara kana girazi rinodziya, kupenya kaviri: 4 + 6 + 4mm, 5 + 6 + 5mm. asi zvakare inogona kusarudza iyo yekuvhara zvinhu zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi, pamusoro peiyo greenhouse uye yakakomberedzwa negirazi yakagadziriswa yakakosha aluminium.Chimiro uye Kugadzirisa1.Skeleton inogadzirwa nerectangular simbi machubhu ayo anotonhora-akakungurutswa, maviri-mativi anopisa-galvanizing.2.The greenhouse inogona collocated neimwe inodiwa system, senge, mukati&kunze shading system, parutivi&padenga kufefetedza system, kudziyisa&kutonhora masisitimu, nezvimwewo.3.Zvifukidzo zvekuvhara zvinosanganisira marudzi maviri egirazi regoro.The tsanangudzo ndeye 4mm + 9mm + 4mm uye 5mm + 6mm + 5mm.4.This type of greenhouse can realised and fully automatic control,ususally used for flower and vegetables planting,scientific research greenhouse,ecological restaurant hotel,flower market,sightseeing display uye kurera mbeu.
Nyanzvi yepurasitiki firimu greenhouse ye-anti-mwaka kurima muriwo
Multi-span plastiki film greenhouse inoshandiswa zvakanyanya mukurima madomasi, miriwo, michero nemaruva. Inogona kupa mamiriro ekuvhenekera kwakakodzera, unyoro uye tembiricha, kusimudza kuburitsa uye kuramba njodzi dzinongoitika dzoga. Inogona kuunza kumberi kana kudzosera kumashure gadziriro, ichibvisa kupokana kwekupa uye kudiwa.
Best mutengo customizable pachena epurasitiki greenhouse
Mazhinji spans e arch greenhouse ane 8 metres yakafara. Chimiro chayo chikuru chinopisa-galvanizing pombi uye chimiro. Kumusoro nekutenderedza kwakakosha PO firimu remulti-span greenhouse kana PC board ye8mm yakafara. Transmittance yayo uye insulation yakanyatsonaka. Yakapoteredzwa iyo yekunze uye yemukati shading system inogadziriswa, pamwe nekumanikidzwa dhizaini fan inotonhorera system, drainage system, dova rekunhonga system, rolling mabhenji uye yemagetsi controlling system. Iyo inodzora sisitimu yemhando iyi greenhouse iri pakati pemagetsi ruoko kutonga.Iyo arch greenhouse inogona kushandiswa kudyara maruva nemiriwo, zvakare inogona kushandiswa seaquaculture greenhouse yeruva, muriwo uye muti. Seyekushongedza greenhouse, inogona zvakare kushandiswa seye ecological resitorendi, kuratidzwa, kushanya uye kutsvagisa kwesainzi, pamwe netsika yemvura uye zvipfuyo.
Yakachipa yekurima imwe-span yemiriwo greenhouse inotengeswa
Chinese Agricultural Culture Poly Tunnel Greenhouses Single-Span GreenhousesSingle span epurasitiki tunnel greenhouse inogadzirwa neinopisa galvanized pombi ine matatu akaturikidzana firimu rekuvhara zvinhu. Iyo furemu chimiro iri nyore, yakachipa mutengo uye nyore kuisa.
Qingzhou Shengqiang Greenhouse Technology Engineering Co.Ltd. inotevedzera huzivi hwebhizinesi hwe "Quality First, Customer First".Musangano uyu unosanganisira nzvimbo inosvika 40000 square metres, ine makore anopfuura 18 ruzivo mukuvaka greenhouse, kusanganisira kubva mugreenhouse dhizaini netsvagiridzo, kugadzira uye kugadzirisa, kuisirwa.
Main products: Polycarbonate sheet greenhouse, girazi greenhouse, akawanda span film greenhouse, maruva greenhouse, hydroponic kurima greenhouse, kurima kurima greenhouse, zvekurima greenhouse, commercial greenhouse, seeding greenhouse, single span film greenhouse, mhuri gadheni greenhouse, greenhouse system ine accessories.
Agricultural Greenhouse Multi-Span Film Greenhouses Projects muKuwait
Agricultural Greenhouse Multi-Span Film Greenhouses Projects muKuwaitChina yekutengesa greenhouse vagadziri : Tinotenda nekuda kwevatengi vedu kuvimba. Takatanga kuvaka greenhouse yegirazi muKuwait. Iwe unogona kuwana emhando yepamusoro greenhouses nemutengo wemakwikwi
1. Yedu yekutengesa greenhouse fekitori yave ichiita kugadzirwa kwegreenhouse kwemakore anopfuura 10, ine hupfumi hwekugadzira uye ruzivo rwekuvaka uye tekinoroji.
2. Yedu yekurima greenhouse fekitori ine dhizaini dhizaini, kuvaka uye manejimendi manejimendi kugona, kupa vatengi ruzivo rwekutenga zviri nani.
3. Fekitari yedu maererano nezvinodiwa nevatengi vanogadzira purogiramu yakanakisisa, muhutano hwepamusoro kune vatengi kuchengetedza mari uye kuwedzera kubudirira kwevatengi.
4. Yedu yekutengesa greenhouse factory inopa warranty yegore rimwe chete. Mushure menguva yewaranti, isu tichave tichiri mutengo unonzwisisika wekupa kutsiva kwegreenhouse accessories.
Bata Isu Tora Iyo Yemahara Dhizaini
Kuti uwane mamwe mibvunzo yezvekurima greenhouse uye yekutengesa greenhouse zvigadzirwa, tinokugamuchirai kuti mubvunze isu.